Amanqaku ka-Alexander García-Tobar kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu Alexander García-Tobar
Usomashishini olandelanayo kunye nesigqeba sehlabathi, uAlexander ube yi-CEO kwiifemu ezimbini zangaphambili kwaye uqhube amaqela okuthengisa ehlabathi kwiinkampani ezintathu eziye kwi-IPO. Wayephethe umhlalutyi kunye nezikhundla eziphezulu kwiinkampani eziphambili zophando ezifana neBoston Consulting Group kunye neForrester Research kunye neSilicon Valley yokuqalisa njengeValiCert, iSygate, kunye neSyncTV.
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 21, 2022 NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 21, 2022 Alexander García-Tobar
Lo bhubhani unyuse imfuno yokuba isebe ngalinye ngaphakathi kumbutho lithathele ingqalelo ngakumbi kukhuseleko lwe-cyber. Iyavakala, akunjalo? Okukhona sibusebenzisa ngakumbi ubuchwephesha kwiinkqubo zethu kunye nomsebenzi wemihla ngemihla, kokukhona sisengozini yokwaphulwa. Kodwa ukwamkelwa kweendlela ezingcono zokhuseleko kufuneka kuqale ngamaqela awaziyo ukuthengisa. Ukhuseleko lwe-Cybersecurity luye lwaba yinkxalabo kwiinkokheli zeTekhnoloji yezoLwazi (IT), iiGosa eziPhezulu zoKhuseleko lweNgcaciso (CISO) kunye namaGosa aPhezulu eTekhnoloji (CTO)